खेल « Janata Samachar
च्याम्पियन्स लिगः अन्तिम १६ को तालिका सार्वजनिक
एजेन्सी । च्याम्पियन्स लिग फुटबल प्रतियोगिता अन्र्तगत अन्तिम १६ को ड्र सार्वजनिक भएको छ । युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको प्रिक्वाटरफाइनलमा साविक विजेता रियल मड्रिड र बार्सिलोनाले कठिन प्रतिद्वन्दी पाएका छन् ।
म्यानचेस्टर डर्वीः फेरि पनि सिटीको दबदबा
काठमाडौँ । इङ्लिस प्रिमियर लिग अन्तरगत आइतबार राति भएको म्यानचेस्टर डर्बीमा सिटीले बाजी मारेको छ । युनाइटेडको मैदान वल्डट्रार्फोडमा भएको यो खेलमा सिटीले २–१ को जित निकाल्दै उपाधि यात्रा अझै
अपाङ्गता भएका व्यक्तीका लागि खेलकुद प्रतियोगिता सुरु
अप्सरा बिष्ट कालिकोट । परिर्वतन सम्वभव छ भन्ने नाराका साथ कालिकोटमा अपाङ्ग भएका व्यक्तीहरुका लागि जनचेतना तथा खेलकुद प्रतियोगिता कार्यक्रम सुरु भएको छ । बिहीबार र शुक्रबार हुने कार्यक्रममा जाउलाखेल
नेपालद्वारा युएर्इलाई २ सय २२ रनको चुनौति
काठमाडौं । आइसीसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गत अन्तिम चरणको पहिलो खेलमा नेपालले युएईसामु २ सय २२ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । युएईको शेख जायद क्रिकेट रंगशालामा टस हारेर
काठमाडौं । आइसीसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गत अन्तिम तथा सातौं चरणको पहिलो खेलमा नेपालले युएईसँग भिड्दै छ । आइसीसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गत अन्तिम तथा सातौं चरणको पहिलो
इपिएल क्रिकेटः ललितपुर पेट्रियट्सले छान्यो चार खेलाडी
काठमाडौँ । इपिएल क्रिकेटमा सहभागी ललितपुर पेट्रियट्सले ट्यालेन्ट हन्टबाट चारजना खेलाडी छनोट गरेको छ । सहभागी १ सय ५ खेलाडी मध्येबाट ललितपुरले चार खेलाडीको टुङ्गो लगाएको हो । इपिएल क्रिकेटमा
एसियन स्काइरनिङ च्याम्पियनसिपको स्वर्ण पदक मीरा राईलाई
काठमाडौँ । अल्ट्राधावक मीरा राईले हङकङको एमएसआइजी लान्ताउ ५० एसियन स्काइरनिङ च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेकी छन्। उनले प्रतिस्पर्धीलार्इ एक घण्टा बढीको समयले पछि पार्दै ५० किलोमिटर लामो दौड पूरा गरी स्वर्ण
नेपाल केन्याबीच अभ्यास खेल आज
काठमाडौं । आइसिसि विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसीपअन्तर्गत आफ्नो अन्तिम खेलको तयारीका लागि नेपालले आज केन्यासँग अभ्यास खेल खेल्दैछ । प्रतियोगिताका लागि युएइमा रहेको नेपालले आज केन्यासँग खेल्न लागेको हो ।
स्पेनिस ला लिगाः रियल मड्रिडको उपाधि यात्रा धरापमा ?
काठमाडौँ । गत सिजनको विजेता रियल मड्रिडले स्पेनिस ला लिगामा खराब प्रदर्शन जारी राखेको छ । गएराति भएको खेलमा रियल मड्रिड कम्जोर प्रतिद्वन्द्वी एथ्लटिको बिल्बाओसँग गोलरहित बराबरी खेलेपछि यो सिजन
न्यूकासल युनाइटेडमाथि चेल्सीको जित
एजेन्सी । इंग्लिस प्रिमियर लिगअन्तर्गत शनिबार भएको खेलमा चेल्सीले न्यूकासल युनाइटेडमाथि ३–१ ले जित हासिल गरेको छ । खेलको १२ औँ मिनेटमा ड्वाइट गेलले गोल गर्दै अग्रता न्युकासल युनाइटेडका लागि
धनुषा एकबाट माओवादी केन्द्रका मातृका यादव निर्वाचित
प्रमोदकुमार साह धनुषा । धनुषा क्षेत्र नम्बर १ बाट नेकपा माओवादी केन्द्रका मातृका यादव विजयी भएका छन् । भर्खरै सम्पन्न मतपरिणाम अनुसार उनले संघीय समाजवादी
काठमाडौं–१ मा समानुपातिकतर्फ कांग्रेस पछि विवेकशील साझा
काठमाडौं । काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा समानुपातिकतर्फको अन्तिम परिणामअनुसार नेपाली कांग्रेसले नौ हजार १ सय २१ मत पाएको छ । यो क्षेत्रमा नेकपा
कैलाली १ ‘क’मा कांग्रेस, ‘ख’ मा राजपा विजयी
धनगढी । कैलाली निर्वाचन क्षेत्र–१ प्रदेशसभा ‘ख’ मा नेपाली कांग्रेसका डा. रणबहादुर रावल नौ हजार ४ सय ३४ मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन् ।
© 2017 Janata Samachar